Uyilo olusebenzayo lwe-E-yorhwebo amaPhepha eMveliso | Martech Zone
Uyilo olusebenzayo lwe-E-yorhwebo Amaphepha eMveliso
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 28, 2012 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 28, 2012 Douglas Karr
Kukho izigidi zeendawo ze-ecommerce phaya kwaye, enkosi, abaphuhlisi, abaqulunqi kunye nabacebisi abasebenza kwiindawo ze-ecommerce bavavanye phantse yonke iteration yephepha lemveliso ukwandisa uguquko. I-Invesp ipapashe ubalo olothusayo xa kufikwa kwiindawo ze-e-commerce:
Umyinge wokulahla inqwelo yokuthenga ngama-65.23%
Ireyithi yokuguqula umndilili wevenkile ye-E-commerce yi-2.13% kuphela
Ixabiso eliphezulu le-odolo yomndilili (i-AOV) isezantsi inqanaba lesiphumo sokusebenza
Kwiwebhusayithi ene-AOV engaphantsi kweedola ezingama-50, iqondo lokusebenza ngempumelelo liku-25%.
Kwiwebhusayithi ene-AOV ngaphezulu kwe- $ 2000, inqanaba lokusebenza kwi-4-5%
Ukudala iphepha lemveliso ye-E-yorhwebo elisebenzayo kubaluleke kakhulu kumava abathengi kunye namazinga aphezulu okuguqula. Jonga i-infographic yethu ukufumana Uyenza njani iMveliso yePhepha le-E-commerce esebenzayo ngamanyathelo alula angama-21. Ukusuka kwiBhlog yoTyalo-mali.
tags: inqanaba lokushiyaI-AOVIxabiso le-odolo eliqhelekileyoinqanaba lotshintshoeCommerceiphepha lemveliso ye-ecommercekuthengwa kwi intanethiukusebenza kwephephaiphepha lomkhiqizoUyilo lwephepha lemvelisoezivenkileni